Iqulu libulale indoda esolwa ngokubamba inkunzi eThekwini | News24
Iqulu libulale indoda esolwa ngokubamba inkunzi eThekwini
Durban – Indoda okusolwa ukuthi ibambe inkunzi umuntu wesifaznae ibulawe yiqulu labantu eVerulam, enyakatho yeTheku ngoLwesihlanu, kusho iziphathimandla.
"Umsolwa obambe inkunzi owesifazane ubulwe ngemuva kokubanjwa abantu abebekhona kwenzeka isigameko esenzeke kuRepublic Street eVerulam namuhla ekuseni," kusho uPrem Balram okhulumela iReaction Unit South Africa.
Ngokusho kukaBalram, isidumbu sendoda sitholwe sidindilize eceleni kwemoto ephaseji ngasemgwaqeni.
OLUNYE UDABA: Iqulu labantu libulale obegqoke izingubo ezebiwe
"Kuzwakale ukuthi umufi ubambe inkunzi owesifazane wamephuca impahl;a yakhe ngesikhathi ephuma emsebenzini. Amalungu omphakathi okuyiwo abekhona kwenzeka isigameko alandele umsolwa amubamba. Iqulu labantu libe seliqala limngenela ngesibhaxu ngaphambi kokumshiya kanjalo eceleni komgwaqo."
UBalram uthe kukholakla ukuthi le ndoda isibaqedile abantu endaweni, ibagebenga.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Nqobile Gwala uthe iziphathimandla ziphenya icala lokubulala.
"Kutholwe isidumbu sendoda eneminyaka engu-30 ubudala inamanxeba okushaywa kuRepublic Street. Ihlonzwe njengoshonile endaweni yesigameko. Umufi akaziwa kanti bekungakaboshwa muntu, uphenyo luyaqhubeka."